Ithegi: Isipaji sedijithali | Martech Zone
Ithegi: isipaji sedijithali
Ukunyuka kwe-Digital Wallet Adoption ngexesha loBhubhane
Lwesine, Disemba 24, 2020 Lwesine, Disemba 24, 2020 UTanya Singh
Ubungakanani bemarike yentlawulo yedijithali kulindeleke ukuba isuke kwi-USD 79.3 yezigidigidi ngo-2020 ukuya kwi-USD 154.1 yezigidigidi ngo-2025, kwi-Compound Annual Growth Rate (CAGR) ye-14.2%. KwiMarketandMarkets Ekubuyiseleni emva, asinasizathu sokulithandabuza eli nani. Ukuba kukho nantoni na, ukuba sigcina ingxaki yangoku ye-coronavirus, ukukhula kunye nokwamkelwa kuya kukhawulezisa. Intsholongwane okanye akukho ntsholongwane, ukunyuka kweentlawulo zokunxibelelana sele kulapha. Ukusukela iiwallet ze-smartphone zixoka
Ungayiphucula njani iRhafu yokuGuqulwa kweselfowni ngeeWallet zedijithali
NgoLwesine, Meyi 28, 2020 NgoLwesine, Meyi 28, 2020 UNina Ritz
Amanqanaba okuguqula iselfowuni abonisa ipesenti yabantu abakhethe ukusebenzisa i-app yakho yeselfowuni / iwebhusayithi elungiselelwe iselfowuni, ngaphandle kwenani labo banikwa. Eli nani liza kukuxelela ukuba lilunge kangakanani iphulo lakho elihambayo kwaye, ngokuqwalaselwa kweenkcukacha, yintoni ekufuneka iphuculwe. Uninzi lwabathengisi be-e-commerce abaphumeleleyo bayayibona inzuzo yabo ukuhla xa kuziwa kubasebenzisi beselfowuni. Inqanaba lokulahlwa kwenqwelo yokuthenga liphezulu ngokuhlekisayo kwiiwebhusayithi ezihambayo, kwaye ukuba kunjalo
Iintlawulo eziSelfowuni-kwindawo yentengiso esesandleni sakho
NgoMvulo, Meyi 14, 2012 NgoLwesihlanu, Novemba 2, 2012 UAdam Omncinci
Bantu, iyeza ngokukhawuleza kunokuba ucinga - kwaye izakuba nefuthe elibonakalayo kwintengiso ekwi-intanethi / ngaphandle kweintanethi, ukumaketha kwakhona, ukuguqulwa kokusebenza kunye nentengiso. Saqala sabelana nge-infographic, iWallet yedijithali kunye neKamva leNtlawulo, kunye neNkqubo yokuHlawula ukuHlawula ngeFowuni… kodwa uNxibelelwano lweeNgingqi ezikufutshane (NFC) luyaqhubeka kwiifowuni ezintsha namhlanje. Ukuhlawulwa kwefowuni kusukile kwinyani yesayensi kwinyani, ukubonelela ngokulula kwentlawulo, ukwanda kokhuselo, kunye nokulandela umkhondo ngokufanelekileyo usebenzisa isixhobo
Isipaji sedijithali kunye nexesha elizayo leentlawulo
Lwesine, Disemba 1, 2011 NgoLwesithathu, Novemba 30, 2011 Douglas Karr
Ngo-2011, inani leentengiselwano zentlawulo yeselfowuni liza kufikelela kwi-241 yezigidigidi zeedola kodwa ngo-2015, kulindeleke ukuba lidlule kwi-1 trillion! Alithandabuzeki elokuba yiyo yonke inkampani yamakhadi etyala kunye nesango lokuhlawula kwi-intanethi kunzima emsebenzini ukutyala amakhulu ezigidi zeedola kwitekhnoloji yoNxibelelwano lweNdawo ekufuphi. Ngokwanda kothungelwano lwebhendi ebanzi kunye nezixhobo eziphathwayo, indlela esihlawula ngayo izinto kulindeleke ukuba itshintshe kakhulu
Thursday, December 1, 2011 Wednesday, November 30, 2011
Iiblogi azizizo iiForamu -zenza isiXhobo esiNtengiso seNtengiso
NgoMgqibelo, Oktobha 27, 2007 NgoLwesibini, Matshi 27, 2012 Douglas Karr
Inkxalabo rhoqo eziswa xa kuxoxwa ngokubhloga kwamashishini njengesicwangciso seshishini luloyiko lwabathengi abafaka izikhalazo zabo. Xa lo mbuzo ubuziwe kwiklasi endiyenzileyo kwiveki ephelileyo, ndiphose inqaku eliphambili endihlala ndixoxa ngalo. Isiseko soku ngumahluko phakathi kweforum kunye nebhlog. Yintoni eyahlula iBhlog kwiQonga? Abantu batyelela iibhloko zebhizinisi ukwakha ulwazi lwenkampani,
Saturday, October 27, 2007 Tuesday, March 27, 2012